Mozisi, Mirayiro 10 Nemhuru Yegoridhe | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Havana Kuita Zvavakanga Vavimbisa
Jehovha akati kuna Mozisi: ‘Uya kuno kugomo kwandiri. Ndichanyora mitemo yangu pamahwendefa ematombo ndobva ndakupa.’ Mozisi akakwira mugomo uye akagaramo kwemazuva 40 neusiku 40. Mozisi paakanga ari mugomo, Jehovha akanyora Mirayiro Gumi pamahwendefa maviri ematombo uye akabva amupa mahwendefa acho.
Kwapera nguva, vaIsraeri vakafunga kuti Mozisi ainge avasiya. Vakati kuna Aroni: ‘Tinoda munhu anotitungamirira. Tigadzirire mwari!’ Aroni akati: ‘Ndipei goridhe renyu.’ Akanyungudutsa goridhe racho akabva aumba chidhori chakaita semhuru. Vanhu vakabva vati: ‘Mhuru iyi ndiyo Mwari wedu akatibudisa muIjipiti!’ Vakabva vatanga kunamata mhuru yacho yegoridhe uye vakaita mabiko. Izvozvo zvakanga zvakaipa here? Ehe, nekuti vanhu vacho vakanga vavimbisa kuti vaizonamata Jehovha chete. Asi iye zvino vakanga vasisiri kuita zvavakanga vavimbisa.
Jehovha akaona zvakanga zvichiitika, achibva audza Mozisi kuti: ‘Buruka uende kune vanhu. Havasi kunditeerera uye vari kutonamata Mwari wenhema.’ Mozisi akabva aburuka mugomo, akatakura mahwendefa maviri aya.
Paakasvika pedyo nemusasa, Mozisi akanzwa vanhu vachiimba. Akabva avaona vachitamba uye vachikotamira mhuru iya. Mozisi akatsamwa zvikuru. Akakanda mahwendefa maviri aya pasi, uye mahwendefa acho akabva apwanyika. Mozisi akabva aparadza mhuru iya. Zvadaro akabvunza Aroni kuti: ‘Zvakafamba sei kuti vanhu vakunyengetedze kuti uite chinhu chakaipa kudai?’ Aroni akati: ‘Usagumbuka. Unonyatsoziva vanhu ava kuti vanhu vakaita sei. Vakanga vachida mwari, saka ndakakanda goridhe ravo mumoto uye pakabva pabuda mhuru iyi!’ Aroni aisafanira kunge akaita izvozvo. Mozisi akadzokera mugomo uye akakumbira Jehovha kuti akanganwire vanhu vacho.
Jehovha akakanganwira vaya vaida kumuteerera. Waona here kuti zvakanga zvakakosha kuti vaIsraeri vateerere Mozisi uyo aivatungamirira?
“Pese paunoita mhiko kuna Mwari, usanonoka kuiripa, nekuti haafariri mapenzi. Ripa zvaunenge wapika.”​—Muparidzi 5:4
Mibvunzo: VaIsraeri vakaitei Mozisi paakanga asipo? Mozisi akaitei paakadzoka?
Eksodho 24:12-18; 32:1-30
VaIsraeri Vanogadzira Mhuru Yendarama
VaIsraeri vakagadzira chidhori vakati chaimirira Mwari, asi Mwari akafara nazvo here?
VaIsraeri Vanogadzira Chidhori
Tsvakai kuti mifananidzo iyi yakasiyana papi mobva mapenda mifananidzo yacho.
VaIsraeri Havana Kuita Zvavakanga Vavimbisa